Eshibhile i-OEM carbon steel milling izingxenye zemishini zezimboni ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
I-Carbon steel CNC milling inezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo futhi ilungele izingxenye eziningi zemishini. CNC lathes kungaba ukucubungula eziyinkimbinkimbi ligijima bobunjwa umzimba. Ezingxenyeni zokugaya zensimbi yensimbi, okungenalutho kulungisiwe, futhi kusetshenziswa umshini wokusika wokugaya ohamba ngesivinini esikhulu ukuhambisa okungenalutho kokungenalutho ukusika ubujamo nezici ezidingekayo. Izingxenye zokugaya izingxenye zemishini zikulungele kakhulu ukucubungula izinhlobo zomsebenzi zokusebenza ezifana nezingxenye ezigobile namathuluzi wokwenza amathuluzi agobile. Izingxenye ezigobile zisetshenziswa kakhulu emkhakheni wezimboni, njengama-turbine blades, ama-propellers wemikhumbi, imikhiqizo yezimboni enezindawo ezi-cylindrical kanye neziyindilinga, njll.
Insimbi yensimbi ephansi, insimbi yensimbi emaphakathi, insimbi ephezulu yekhabhoni, insimbi yokusika yamahhala evuselelwe kabusha, insimbi esike yaphinde yavuselelwa futhi yaphinde yenze kabusha i-phosphorus, nensimbi ephezulu ye-manganese ephezulu (okuqukethwe kwe-manganese ngaphezu kwe-1%)
Ukwelashwa kwendawo yensimbi yekhabhoni kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, njengokuqhuma kwesibhamu, is sandblasting, amanzi anomfutho ophakeme, ukukha amanzi nokunye.
Pre-treatment → passivation (ngokuya ngemithetho yenqubo) → ukuqhuma (amanzi abandayo noma amanzi ashisayo) → neutralization → ukwelashwa kokoma
Kusukela kokuqukethwe kuya ekupakisheni, yonke inqubo yokuxhumanisa umshini wokulinganisa ilawulwa ngokuqinile.
Isetshenziswa embonini esindayo, imboni elula, imboni yezidingo zansuku zonke, umhlobiso wokwakha nezinye izimboni
Yamukela i-CAD ezenzakalelayo, i-JPEG, i-PDF, i-STP, i-IGS kanye namanye amafomethi wefayela
Langaphambilini Kwenziwe ngentando izingxenye zensimbi yekhabhoni yensimbi yokucubungula izingxenye zemishini
Olandelayo: Izingxenye zepulasitiki ze-CNC